တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အချစ်များစွာဖြင့် ...
Posted by မေဓာဝီ at 12:30 AM
အချစ် အချစ်၊ ခါခါချစ်သော်
အခြစ်မတတ်၊ သူ လက်ပြတ်၏။
အရစ်လွန်က၊ သူ ဒေါထ၏။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ငါးပိချက်.. အဟွတ် အဟွတ်။
အဘအသက် ရာပြည့်ပွဲမှာ ငါးပိချက် အော်ဒါ မှာဦးမယ်။ အဟွတ် အဟွတ်။ ဗိုက်ထဲကလဲ နာသလိုလို။ ဂွီ... ကျုတ် ကျုတ်။ ကလု ကလု။း)))
များများချစ် အဲ ခြစ်နိုင်ပါစေ။
များများ ခြစ်နိုင်ပါစေ...း)
မမမေဓာဝီ သနားပါတယ်.. အခြစ်ဘ၀ကနေ မတက်တော့ဘူးထင်ပါတယ်...
ဧကန္တ ပန်းသီးငပိချက်က လက်ရာကောင်းလွန်းလို့ဖြစ်မယ်။
ပန်းသီး ငါးပိချက် ကောင်းမယ့်ပုံပဲ..
7/29/2011 2:57 AM
ဟိုနေ့က ပန်းသီးအစိမ်းရောင်တစ်လုံး ခွဲစားတာ ချဉ်လွန်းလို့ သကြား၊ ငရုပ်သီးမှုန့် ငံပြာရည်နဲ့ နယ်စားလိုက်ရတယ်။ မေဓာဝီပြောမှအကြံရတယ်။ ဂွေးသီးငပိချက်စားချင်နေတာကြာလှပြီ။ ပန်းသီးငပိချက်စားရမယ်ကွ။
“ပန်းသီးတစ်ပင်တုံးကာမှ မမေဓာပြန်ခဲ့မယ်” ဖြစ်နေပြီထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူကြီး ပန်းသီး မမေဓာ ငပိချက် ကတော့ အလှူလုပ်လိုက်ရလို့ နှစ်ယောက်လုံး ကုသိုလ်ရတာပေါ့နော်။ ဖတ်ပြီးတော့ ရီလိုက်ရတာ။ နည်းလမ်းတစ်ခုတော့ရပြန်ပြီ ပန်းသီးငပိချက် လက်တည့်စမ်းစရာ.. ဧည့်သည်တွေရောက်ပြီး မအားတာနဲ့ အိမ်မလည်ဖြစ်တာ အတော်ကြီးကြာသွားတယ် မမေရေ..
7/29/2011 4:11 AM
သြော်ဗျာ ချစ်ဆိုလို့ ခြစ်ဖြစ်နေတာကိုး
အစားသောက်ဆို ဂလုပြီးသားပဲ မမေဓာဝီရေး)
7/29/2011 5:08 AM
ဖတ်ပြီးတော့ ရီလိုက်ရတာ မျက်ရည်တောင် ထွက်တယ် သကြီးမင်း ကတော်တော်ရက်စက်တာဘဲ မမေဓါ မချစ်ရ မနေနိုင်အောင် လုပ်ရက်တယ်
တော်တော် ဆိုးတဲ့ သကြီးမင်း ရွှေစင်ဦး လည်း သကြီးမင်း ပေးမဲ့ မြေမနင်း သားပန်းသီးသား လေးတွေ ကြောက်လို့ အင်္ဂလန် လာမနေတော့ဘူးနော်
7/29/2011 5:36 AM
ကြီးမေ မချစ်တတ် ချစ်တတ်မို့လို့ပင်ပန်းတာနေမှာဗျ အချစ်တွေ များလွန်းရင် ၀ိုင်ဖောက်သောက်ဗျာ ပန်းသီးဝိုင် ဆိုရင် တော်တော်ကောင်းမယ် မက်မန်းဝိုင် စပျစ်ဝိုင်တွေလိုမျိုးလေ ကြီးမေ စမ်းကြည့်ပြီး အောင်မြင်ရင် သူဂျီးကို အရင်လက်ဆောင်မပေးနဲ့ စစတို့ညီအမတွေကို အရင်ပေးဗျာ အောင်မြင်ရင်တော့ အသံတိမ်တိမ်လေးနဲ့ ကျေး...ကျေး..ဇူးတင်ပါတယ် စစဆိုပြီး အရင်မစဗျာနော်။
အခုတော့ ကြီးမေရဲ့ ပန်းသီးငပိချက်လေးစားချင်တာ သရေယိုနေပြီ။
7/29/2011 5:42 AM
:D... ချစ်နိုင်သူတွေ ချစ်ကြပါဗျို့...း)))
ပို့စ်လေးဖတ်ရင်း ရီမိတယ်မမရေ...အကိုကလည်းဆိုးပ ..မချစ်ချင်တဲ့ မမကို ချစ်စရာ အဲ.. ခြစ်စရာ အလုပ်တွေပေးလို့.. ဘာပဲပြောပြော ပန်းသီး ငါးပိချက်တော့ စားချင်သား..:):) စားဘူးသေးလို့..:P
ပို့စ်ရဲ့အကျဉ်းချုပ်ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်လိုက်တော့ မမေတော့ အချစ်အကြောင်းတွေ တင်ပြီပေါ့။ စစချင်း နောက်မီးဖိုခန်းထဲ၌ အားကြိုးမာန်တက် ချစ်၍နေ၏ဟု ဖတ်ရှုရသောအခါ စိတ်ထဲဝယ် ချက်သည်ကို ချစ်သည်ဟု ထင်မှတ်လေသတတ်။ ဆက်ကာဖတ်ကြည့်တော့မှဖြင့် ချစ်နဲ့ခြစ်ပါလားဟူ၍ သဘောပေါက်လေတော့သတည်း။ နောက်ထပ်သဘောပေါက်လိုက်သည်ကတော့ အင်္ဂလန်မှာ ပန်းသီးအလွန်ပေါများကြောင်းပါတည်း။ အင်္ဂလန်သွားလည်ရင်ဖြင့် ကြီးမေတို့၊ သူကြီးမင်းတို့ကပ်မည့် ပန်းသီးငပိသုပ်ကို အခုကတည်းက စိတ်မျက်စိထဲဝယ် မြင်ယောင်မိသေးသည်။ ပန်းသီးများများစားလျှင် ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာလာပြီး တောင့်တင်းခိုင်မာလာသည်ဟု ပန်းသီးစားရခြင်းအကျိုးကို ဖတ်ဖူးထားလေတော့ ကြီးမေနဲ့ သူကြီးတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်သည် ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ သန်သန်စွမ်းစွမ်းများ ဖြစ်ဟန်တူ၏ဟု စိတ်ထဲက မှန်းဆကြည့်လိုက်သေးသည်။ (သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့္ဓဓာတ်ပုံများ မြင်ဖူးချင်လိုက်ပါဘိနော်၊ မပြတော့လည်း စိတ်မဆိုးပါ)
(အော် ဒါနဲ့ ကြီးမေရယ် ဟ၀ှါလေ ဘုန်းဘုန်း ခရီးထွက်နေတုန်းလေ အစိမ်းရောင်ဆိုဘ်မှာ မှာတမ်းစကားလေးဘာလေး ရေးထားသေးသလား ခရီးထွက်တာတို့၊ နေမကောင်းတာတို့ပေါ့၊ အခု ဖွင့်မရဘူးနော်၊ လည်နေကျဆိုဘ်မို့ ဖွင့်မရတော့လည်း ခရီးများထွက်နေတာလား နေများမကောင်းတာလား စသည်ဖြင့် သိချင်နေမိတာ အမှန်ပါ၊ သိရင် ဖြေပေးကြပါကုန်လော့)
'အချစ်'များစွာဖြင့်မှ 'အခြစ်'များစွာဖြင့်သို့ ပြောင်းပြီးဖတ်သွားတယ် မေဓာဝီရေး)။
ပန်းသီးငါးပိချက်လေးက စားချင်စဖွယ်ပဲ။ ကွန်မန့်တွေအားလုံးဖတ်ရတာလည်း စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်။
7/29/2011 8:10 AM
မမေရဲ့ အသော့အထေ့လေးတွေကို သဘောကျလိုက်တာ၊ ရေးတတ်တယ်ဗျာ..၊းD ကြားဖူးတဲ့ "An appleaday keepsadoctor away" ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ဆိုရင်တော့ မမေတို့ တူဝရီး ၂ ယောက် ဆရာဝန်ကို တော်တော်နဲ့ တွေ့စရာ မလိုတော့ ဘူးပေါ့..၊း) ငါးပိချက်ကတော့ တကယ့်ကို စားကောင်းမယ့် ပုံပဲဗျာ....။
I can't stop lol by the post and apple donar Thagyimin's comment.I do apple pickle sometime.It's the same way to do like other pickle if you like spicy mango pickle.(THADU)3 for your effort to religion.
အစ်မ လက်မောင်းတွေ တော်တော် တောင့်လာမှာပဲဗျး) စားဖူးချင်တယ် အဲ့တာမျိုး မစားဖူးဘူးး ။
သရက်သီး ငပိချက်တော့ စားဖူးဘူးဗျာ...စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ တွေ့တဲ့ ငပိထောင်းဗူးပဲ လျက်ကြည့်မိတယ်...ငပိမကြိုက်တဲ့လူမို့ထင်ရဲ့ အရသာ တစ်စက်မှကို မတွေ့ဘူး...ငံစပ်စပ်နဲ့...ဒါပေမယ့် ပုံထဲက ပန်းသီးငပိထောင်းတော့ မြည်းချင်သားဗျာ...သူကြီးမင်းကုသိုလ်...အစ်မမေလက်ရာ ဖြစ်နေလို့...
မကုန် ကုန်အောင် ကြံဖန်မှ နောက်တအိတ်နဲ့ ထပ်တိုးနေတယ်။ ဒီတခါတော့ ငပိချက်လုပ်ပြီး နိင်ငံတကာက ဘလော့ဂ်မောင်နှမတွေဆီသာ ပို့လိုက်ပေတော့။ နောက်တခါတွေ့ရင် သူကြီးလည်း အပင်လိုက် နှုတ်လာမယ်ထင်တယ်။ ဘလော့ဂ်ဂါမိတ်ဆွေတွေ အခင်အမင်တယ်ကြီးပါ့။
7/31/2011 1:24 PM
အင်း သူတို့ တွေ တော်တော်ခင်ရှာတယ်။ ပန်းသီးဟင်းချက်တာတွေ တီဗွီမှာ မြင်ဘူးတုံးက အံသြနေတာ။ ခုတော့ မြန်မာမူပြုထားတဲ့ ဟင်းတွေ့ ရတော့တယ်။
8/02/2011 8:54 AM
မမေ..မြန်မာပြည်ရောက်နေလို့ ဘလောက်ကို မရောက်ဖြစ်ဘူး..ပန်းသီး ငါးပိချက် မစားဘူးလို့.. သွားရေ ယိုလိုက်တာ.. အရမ်းစားချင်တာပဲ။
ချက်ပုံ ချက်နည်း တင်ပေးပါဦးနော်..